SP-L05 SOICARE 500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Mkpa Oil senti Diffuser, China SP-L05 SOICARE 500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Mkpa mmanụ senti Diffuser Manufacturers, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited
SP-L05 SOICARE 500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Mkpa mmanụ senti Diffuser
500ml Ultrasonic Humidifier Aromatherapy Dị Mkpa Oil senti Diffuser
· AROMATHERAPY Ngwaọrụ: Nke a dị oké mkpa ultrasonic diffuser bụ ihe ịtụnanya multifunction aromatherapy ngwaọrụ n'adịghị ka ndị ọzọ ọ bụla ị na-eji. Ọ na atụmatụ a nnukwu na mfe ọcha nnukwu 500ml mmiri tank, 7 dị iche iche Ikanam ìhè na agba, otutu alụlụ nebulizer ụdịdị, nakwa dị ka a nchekwa akpaaka-ịgbanwee na-egbochi ya ekpo oke ọkụ bụrụ na ọ ga-agwụ nke mmiri.
· Ike dị ukwuu ma dị ukwuu na-egosi ogo ikuku: Site na ikike nke 500 milliliters, nke a dị mma maka nnukwu ụlọ na oge ọrụ nwere ike ruo 16 awa. Jiri ya iji mee ka ikuku na ikuku nke ụlọ gị ka mma, kpuchie ísì nke anụ ụlọ ma ọ bụ ị smokingụ sịga, ma chebe ezinụlọ gị pụọ na ikuku ikuku, microorganisms, allergens na ndị ọzọ!
· AKW QKWỌ AKW -KWỌ AKW BKWỌ BPA-FREE: Mgbe ọ na-abịakwute ndị na-ekesa mmanụ dị mkpa anyị, anyị na-ekwu na anyị agaghị eji ihe ọ bụla ma ọ bụghị otu ọkwa dị elu, nchekwa, na eco-friendly PP ihe ụmụaka karama si, yana steeti usoro nhazi nke nka na njikwa ike siri ike.
· A nnukwu onyinye echiche maka onye ọ bụla: Ọ bụrụ na ị na-na ahịa nke a mara mma na ndị bara uru onyinye, ị pụrụ ịkwụsị anya. Nke a oké aromatherapy mkpa mmanụ diffuser bụ a echiche na kemfe ugbu, onye na onye ọ bụla nwere ike irite uru na. Na a Nchikota nke ịke, imewe na ọrụ dị ka na, ọ bụ a àgwà-obi ike hit
aromatherapy mkpa mmanụ diffuser
nkwụnye, ịlele cup
Soft & Ọkụ Night Night / Agba Led